Faritra Anibal Pinto, Plaza Aníbal Pinto - Valparaiso
Amerika Atsimo Shily Valparaiso
Adiresy: Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile.
Toy ny any amin'ny firenena, any Chili dia mahazatra ny miantso efamira sy arabe ho fanomezam-boninahitra ireo mpiray tanindrazana malaza. Noho izany, ao an-tanànan'i Valparaiso dia misy an'i Anibal Pinto Square, nantsoina taorian'ny filoha Shiliana teo aloha.
Ny filoha Anibal Pinto no nitarika ny firenena nanomboka 1876 ka hatramin'ny 1881, izay iray amin'ireo sarotra indrindra ho an'i Chili. Tsy nilaina ny kianja taorian'ny anaran'ny mpanao politika teo aloha, satria nipetraka tao amin'ny trano maotina teo akaikiny izy.
Rehefa nandao ny politika i Anibal Pinto dia nandrakotra ny trosa, izay natokany, nivarotra ny fananany rehetra. Mandeha manodidina ny kianja, sarotra ny mieritreritra fa ny loham-panjakanan'ny firenena dia afaka miaina ao anatin'ny tranobe tsy mitsaha-mitokona toy izany. Na izany aza, ny famantarana eo amin'ny fasa dia manaporofo ny zava-misy, izay manamarina izany.
Androany, ny Kianjan'ny Anibal Pinto no foibem-pitaterana lehibe indrindra ary ny mari-toerana ao Valparaiso. Niova imbetsaka ny endriny. Noho izany, tany am-piandohan'ny taona 1930 dia nisy loharano iray misy sary sokitra nanoratana ny andriamanitra Neptune, saingy nosoloina tsangambato ho an'ny sambo manan-tantara Carlos Condell.
Ny faritra Anibal Pinto dia manintona ireo mpizahatany tsy mahaliana ny tombotsoany, fa ny mpanjifa fotsiny, satria eto dia afaka mividy voninkazo vaovao ho an'ny vidiny mahatsikaiky. Ny kianja dia toerana velona, ​​satria tian'ny mponina ao an-toerana. Mipetraha ao anaty cafe ety ivelany, misotroa divay na kafe Chileana - ny fialan-tsasatra tsara indrindra rehefa mandeha manodidina ny tanàna.
Ao amin'ny tranom-bahiny mahazatra dia milalao mozika latinina, izay tsy isalasalàna fa hampakatra ny dihy tia. Ny malaza indrindra amin'ny mpizaha tany sy ny mponina dia ny bar Cinzano. Rehefa mitsidika an'i Valparaiso ianao dia tokony hampiditra ny faritra Anibal Pinto eny an-dalana, satria tombontsoa ara-kolontsaina. Ankoatra ny tranon'ny filoham-pirenena teo aloha, trano hafa eny an-kianja dia manan-danja ara-tantara.
Ny toerana dia manintona mpizahantany sy trano fisakafoanana, izay misy sakafo matsiro. Amin'ny alina, tonga ny faritra, satria misy mpihira an-dalambe, mpanakanto, ary koa olona ao an-toerana.
Any akaikin'ny kianja dia misy hotely tsara tarehy, toerana ahitana ny vahiny ary miorina amin'ny avo indrindra.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny kianja?
Ho tonga any amin'ny kianja, indray mandeha any Valparaiso , afaka mampiasa fitateram-bahoaka, na mandeha an-tongotra. Na aiza na aiza misy mpizahatany tonga any amin'ny toerana misy azy, dia mahazo fotoana manokana izy ireo hahafantatra tsara ny rafitr'ireo Valparaiso ary amin'ny antsipiriany mba hijerena ny kianja Anibal Pinto.
Ny alahelon'ny Via Dolorosa
Karazam-bolo madinika amin'ny vohoka
Taom-panala tao anaty lavarangana - famantarana
Fihaonam-behivavy mivangongo an-dry Stallone
Ny ankizy George Clooney dia mihevi-tena ho toy ny paosin'ny masony
Ahoana ny fomba hanalavirana ny tsindry alohaloha?
Karazana paoma Melba
Ahoana no hampiasana tsara tantely, mba hahasoa azy io?
Sterilizer ho an'ny boaty
Mila visa ho an'i Montenegro ve aho?
Hormonina aretina amin'ny vehivavy
Diathese amin'ny zaza